Hampanofa Trano Amin’ny Vavolombelon’i Jehovah Hoe?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Batak (Toba) Bichlamar Catalan Cebuano Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Javaney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Ourdou Pendjabi Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tarasque Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Télougou Valencienne Vietnamianina Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Éwé
Taratasy avy Amin’ny Tompon-trano
Vao haingana izay no vita ny fanitarana an’ireo trano any amin’ny Toeram-pambolena sy Fiompian’ny Vavolombelon’i Jehovah any Wallkill, any New York. Naharitra enin-taona io tetikasa io fa nandroso be ilay fanorenana nandritra ny roa taona farany. Be dia be àry ny mpiasa an-tsitrapo ka trano 25 teo amin’ny manodidina no nohofana mba hipetrahan’izy ireo.
Ny mpanofa trano
Inona no tsapan’ny tompon’ireo trano nohofan’ny Vavolombelon’i Jehovah?
Izao no nosoratan’ny tompon-trano iray: “Mahafinaritra anay ireo mpanofa trano ireo. Eo akaikin’ilay [trano nampanofaina] izahay mivady no mipetraka, dia hitanay hoe mora ifanarahana sy sariaka be foana ry zareo.”
Mipetraka eo akaikin’ny trano nampanofainy koa ny vehivavy iray, ary hoy izy momba an’ireo nanofa ny tranony: “Nahafinaritra foana ny niaraka tamin-dry zareo. Manana dobo filomanosana izahay eo an-tokotany, dia tonga tao ry zareo rehefa nasainay. Nanaja sy tsara fanahy foana ry zareo. Tianay be ny niaraka taminy, dia halahelo izao izahay satria tsy hahita an-dry zareo eo an-tokotany intsony.” Mbola nohamafisiny ihany hoe: “Tena nahafinaritra ny niaraka tamin-dry zareo.”
Nilaza ny tompon-trano iray hoe: “Faly aho hoe sady mpanofa tranonay ry zareo no mpiray tanàna taminay.”
Ny trano nohofana
Ahoana no fahitan’ny olona ny tranony rehefa lasa ny mpanofa?
“Voaloa ara-potoana foana ny hofan-trano, [ary] voakarakara tsara ilay trano sady tsy nisy simba mihitsy.”
Nilaza ny iray amin’ny tompon-trano voaresaka tetsy aloha hoe: “Misaotra anareo sy ny fikambananareo fa nokarakarainareo tsara ny tranonay.” Nilaza koa izy fa tsy nampoiziny hoe hanadio “tanteraka” an’ilay trano ny Vavolombelon’i Jehovah.
Hoy ny vehivavy iray: “Fantatray tsara fa azo itokisana ny fikambananareo dia izany no nahatonga anay tsy [naka] antoka taminareo. Tsy nisy simba mihitsy ireo trano roa nampanofainay rehefa niala ianareo.”
Nanamboatra zavatra vitsivitsy tao amin’ny trano nohofany ny Vavolombelon’i Jehovah, dia nilaza ilay tompon-trano hoe: “Ahoana no hataoko raha te hampiasa anareo aho? Rehefa manome fotoana hamitana zavatra iray ianareo, dia vita amin’iny tokoa ilay izy. Tsy mba mitana ny teniny hoatr’izany ny olona mpikarakara ny tranoko.”
Nanoratra tany amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ny tompon’ny trano iray, raha mbola tsy tapitra ny fotoana nanofana an’ilay trano, hoe hahenany be mihitsy ny hofan-trano raha mbola hanofa an’ilay trano izy ireo.
Hoy koa ny tompon-trano iray: “Raha mbola mitady trano hofana ny fikambananareo amin’ny manaraka dia mbola vonona hanome trano izahay.”